လိပ်ပုပ် - ဝီကီပီးဒီးယား
လိပ်ပုပ်သည် မွန်လူမျိုးများကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြသည့် မြန်မာ့မိရိုးဖလာနတ်တစ်ပါး ဖြစ်သည်။
လိပ်ပုပ်နှင့် ပတ်သက်သည့် သမိုင်းကိုမူ စာပေများတွင် တွေ့ရှိရခြင်း မရှိပေ။ သို့သော် သက်ကြီးရွယ်အို မွန်လူမျိုးတို့၏ စကားဖြင့် မှတ်သားခဲ့သည်များ ရှိသည်။
ဒီရေစောင့် နတ်သမီး၏ စီးတော်ယာဉ်မှာ လိပ်ဖြစ်သည်။ အသားမင်းသားနှင့် နတ်သမီးတို့သည် တန်ခိုးပြိုင်ကြသည်။ ထိုအခါ အသားမင်းသား၏ ဒရယ်ကျောပြောင် အမြီးတစ်ထောင်ထဲမှ အမြီးတစ်ချောင်းကို နတ်သမီးက ခိုးယူထားခဲ့သည်။ ထို့နောက် သူမ၏ ခါးစည်းကြားတွင် ညှပ်ထားခဲ့သည်။
အသားမင်းသားသည် မသင်္ကာ၍ နတ်သမီးကို ရှာဖွေပါသော်လည်း စီးတော်ယာဉ်လိပ်က စားလိုက်ပြီ ဖြစ်သဖြင့် မတွေ့ဘဲ ဖြစ်နေ၏။ ထို့အတွက်ကြောင့် အသားမင်းသားသည် အရှုံးပေးကာ ဝန်ခံထားသည့် ကတိအတိုင်း မင်းသားသည် ကျွဲခေါင်းကို ဖြတ်ကာ နတ်သမီးကို တင်ရသည်။
အသားမင်းသား မင်းဖြစ်လာသည့်အခါတွင်မူ တစ်တိုင်းပြည်လုံး မင်္ဂလာဆောင်သည့်အခါ ကျွဲခေါင်းဖြတ်ကာ နတ်တင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအခါမှစကာ ရိုးရာအစဉ်အလာ ဖြစ်ကြသည်။
မွန်တို့သည် လိပ်ကို နိမိတ်မကောင်းသည့် သတ္တဝါအဖြစ် ရွံရှာကြသည်။ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲများ မပြုလုပ်မီ လိပ်သတ္တဝါဖြင့် နတ်တင်မြှောက်ကြသည်လည်း ရှိခဲ့သည်။
မွန်လူမျိုးတို့၏ အိမ်ပေါ်သို့ အကြောင်းတစ်စုံတစ်ခုဖြင့် လိပ်ရောက်ရှိပါက “လိပ်ပုပ် လိပ်ပုပ်” ဟု အိမ်ရှင်များက အလန့်တကြား ပြောကြသည်။ အချို့က မျက်စိမှိတ်၍သော်လည်းကောင်း၊ အချို့ကမူ မျက်နှာလွှဲ၍ သော်လည်းကောင်း အခြားတစ်နေရာသို့ အမြန်ယူသွားရန် ပြောကြသည်။ အချို့ကမူ လိပ်ကိုသတ်ကာ နတ်ကျွေးကြသည်လည်း ရှိသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ဦးထွေးဟန် (၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၁၇ ရက်). မြန်မာ့မိရိုးဖလာဓလေ့ နတ်သမိုင်း. အမှတ် - ၅၊ တင့်ဆန်းလမ်း၊ ဗဟန်း၊ ရန်ကုန်မြို့: ရွှေပုရပိုက်စာပေ, ၁၈၉။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လိပ်ပုပ်&oldid=474597" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၂၃:၃၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။